AbaKhangeli beGPS baBantwana kunye noMntwana one-Autism-iZisombululo ze-OMG
I-Tag: abantwana abane-autism, iimfuno ezikhethekileyo zomntwana, i-gps tracker yabantwana, isixhobo sokulandela umkhondo we-gps, umkhondo wabantwana, isixhobo sokulandela umkhondo sabantwana, umkhondo wabantwana
Abantwana abanalo Autism kunye nezinye iimfuno ezizodwa zinokungangqinelani kwaye zinokuba nobunzima ekunxibelelaneni nabantu. OMG GPS Tracker sisisombululo sokujonga esenzelwe autism abazali. Xa umntwana one-Autism ebhadula, umzali unokujonga nje indawo kwi-App ekhutshelwe kwi-Smartphone. Akukho sidingo sokuqala ukubiza amapolisa okanye abamelwane ukuzama ukufumana umntwana olahlekileyo.
Ngoncedo Itekhnoloji ye-GPS ezi wattshu ziyakwazi ukuxelela indawo yomntwana ngenqanaba elimangalisayo lokuchaneka. Usebenzisa i-App kwi-Smartphone yakho, vele ukhuphe imephu kwaye uya kukwazi ukubona indawo ngqo yomntwana.
Iwotshi zinokufumana imiyalezo yelizwi, oko kuthetha ukuba abazali banokurekhoda umyalezo welizwi kwaye ngokuzolileyo babuze Umntwana ozimeleyo ukuba abuyele ekhaya.
Esi sixhobo sisebenza njengefowuni, ikuvumela ukuba ufowunele umntwana kunye nokuqonda kancinci ukuba uphi.
I-GPS054D-OMG GPS Pendant Tracker (i-Dementia yaBadala kunye nabantwana)
I-GPS043D-IGPS Tracker Pendant yeAtism Autism yaBantwana / abantwana abaneemfuno ezizodwa
I-GPS014D-I-OMG ye-GPS yokuHamba ngeXesha lokuHamba kwabaDala kunye naBantwana-AKUKHO Ntlawulo yenyanga
iHelp 2 -I-GPS yokuKhangela isitshixo, ukungangeni manzi, ukungashukumi kunye nokuwa (kubantu abadala abanesifo sengqondo esixhalabisayo)
I-GPS032W-i-OMG engenaManzi i-4G GPS Tracker yaBantwana abaBukela iiFowuni
I-GPS029W-i-OMG yokuGcina amanzi ngokuGcina abantwana
5287 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-8 Namhlanje